Lalaon’ny CJSOI : hanehoana ny kolontsaina malagasy ny soradihy… | NewsMada
Lalaon’ny CJSOI : hanehoana ny kolontsaina malagasy ny soradihy…
Tsy fanatanjahantena ihany. Hanana ny toerany koa ny zavakanto sy ny kolontsaina, mandritra ny lalaon’ny kaomisiona ho an’ny tanora sy fanatanjahantena aty amin’ny ranomasimbe Indianina (CJSOI)…
“Tanora tompon’andraikitra amin’ny fanamafisana ny firahalahiana”. Lohahevitra iombonana, mandritra ny lalaon’ny CJSOI Andiany faha-10, izay hotontosaina aty amintsika io. Hanana ny toerany ihany koa ny zavakanto sy ny kolontsaina, amin’ny alalan’ny teatra, soradihy ary mozika nentim-paharazana.
“Efa ela ny nanomana ka ao anatin’ny dingana farany amin’izay fiatrehana izay izahay izao”, hoy ny nambaran-dRaoseta Ony Soa, tompon’andraikitra amin’ireo taranja ireo. Nisy, araka izany, ny famerenana izay notontosain’ireo tanora handray anjara, omaly, tetsy amin’ny ANS Ampefiloha.
Araka ny fanazavana, mizara roa ny soradihy homanin’ny solontena malagasy. Soradihy mandefa hafatra ny voalohany, miaraka amin’ny hira “Aza malahelo intsony”. Dihy miaraka amin’ny mozika avy any atsimo, saingy maneho ny dihy malagasy rehetra misy isaky ny faritra kosa ny faharoa. Maneho ireo mampiavaka an’i Madagasikara, toy ny dihin’ny tana, dihin’ny bibilava, sns, ihany koa izany. Tanora 14 hatramin’ny 17 taona miisa 18, araka ny mason-tsivana napetraka no hanatontosa ireo soradihy ireo.
Eo amin’ny lafiny teatra, misy piesy roa ihany koa hasehon’ny Malagasy mandritra izany. “Code des jeunes” ny voalohany ary “L’union fait la force” ny faharoa. Enina ireo mpandray anjara fototra ka mizara mitovy ny isan’ny tovovavy sy tovolahy. Misy mpandray anjara fanampiny kosa ankoatra azy ireo. « Firenena mandray ny fihaonana isika, ka mila maneho zavatra tsara kokoa. Efa nahazo naoty tsara foana i Madagasikara hatramin’izay, saingy mbola ezahinay ho tsaratsara kokoa izany », hoy hatrany ny fanazavana. Hanomboka ny 30 jolay hatramin’ny 5 aogositra ny fihaonana. Ao amin’ny Cemdlac Analakely no hanatontosana ny teatra sy ny soradihy.